WWDC 2016: ihe niile ị tụrụ anya maka iOS, OS X | Esi m mac
Laura varo | | Asịrị
Ofbọchị ememme nke Nzukọ nke ndị mmepe WorldWide 2016, nke ọdịnala ihe omume lekwasịrị anya ndị mmepe na Apple na-ahazi kwa afọ iji chee ozi ọma na akara uto nke ngwaahịa ya. Ọnwa Isii 13-17, Gralọ Nzukọ Bill Graham Civic na San Francisco ga-emeghe ọnụ ụzọ ya iji kpoo WWDC, otu n'ime ihe omume teknụzụ kachasị atụ anya na 2016.
Enwere ọtụtụ asịrị anyị maara banyere data a ga-ekpughe n'oge WWDC 2016, ma ha niile na-atụ aka na nkwenye siri ike na ngosi nke ngosi ahụ. sistemụ arụmọrụ ọhụrụ Mac OS X 10.12, nke nwere ike ịnyegharị aha MacOS, site na iOS 10 na mmeghari ohuru nke tvOS na nche.
1 Na WWDC 2016 Siri ga-abụ eziokwu na Mac OS X
2 Ihe anyị chọpụtara banyere iOS 10 na WWDC 2016
3 Kedu ihe ọzọ anyị tụrụ anya na WWDC 2016?
Na WWDC 2016 Siri ga-abụ eziokwu na Mac OS X
Akara Gurman, Onye isi nchịkọta akụkọ na 9TO5MAC ma na-ahụ maka ụfọdụ n'ime ụlọ ọrụ siri ike, kwuru okwu na February gara aga banyere ebumnuche ụlọ ọrụ ahụ gụnyere Siri na sistemụ arụmọrụ ọhụrụ. Mgbe afọ anọ nke mmepe, ọ dị ka ndị injinia enwetala a ọcha na oru oma interface yiri nke iOS na ọdịdị na nhazi ohere, nke a ga-ewepụta na WWDC 2016.
Na Mac OS X 10.12 anyị nwere ike ịgbalite Siri site na ịpị bọtịnụ ọhụrụ nke a ga-ahụ na menu menu nke desktọọpụ anyị, na ohere nke ịhazi a mkpirisi mkpirisi keyboard na iwu olu "Hey Siri" olee uru ọ baara anyị na iOS. Site na usoro ihe anyi choro, anyi puru ime mgbanwe ndi di nkpa na a panel ọhụrụ raara nye onye inyeaka iji mee ka ọrụ ọhụrụ a kwekọọ na mkpa anyị.
Ọ bụ ezie na enweghi ọtụtụ nkọwa nwere ike ịkwado ya, enwerekwa ohere ụlọ ọrụ ahụ kpebiri ịzụlite interface dị mfe nghọta karịa maka Apple Music na atughari iji meziwanye omuma nke udiri ndi oru nile.
Ihe anyị chọpụtara banyere iOS 10 na WWDC 2016
Na iOS 10, ebulitela atụmanya na ntụnye na-enweghị ngwụcha nke na-eduga ndị na-eso ụzọ nke akara a na nkwenye na-enwu enwu, ọ bụ ezie na ọ na-atọ ụtọ. Site na MacRumours anyị na-enweta ihe ịchọrọ ezi uche ga-ewetara ndị ọrụ ndị nzọ na agagharị na-arụ ọrụ site na iPhone na iPad uru dị ukwuu.
IOS 10 ọ ga - enye anyị ohere ijikwa folda na dọkụmentị anyị kpamkpam ma rụọ ọrụ na usoro ịhazi ọtụtụ nke kewara na ihuenyo? Anyị ga-echere mmalite nke WWDC 2016 ịmara n'ụzọ zuru ezu usoro ihe ọhụrụ a nwere ike ịbịaru na iPhone anyị n'oge na-adịghị anya.
Gịnị dị ka enen bụ na Apple kpebiri iji chee a asụsụ ala ngwa lekwasịrị anya na akpaaka ụlọ na ijikwa ụfọdụ sistemụ smart n'ụlọ anyị.
Ebumnuche a iji sonye na mgbanwe na-eto eto nke akpaaka ụlọ ekwuputala ya na 2014 mgbe oru mmekorita ya na ndi okike ngwaike nwere ọgụgụ isi malitere site na HomeKit. Agbanyeghị, na iOS 10 mbinye aka nke Cupertino nwere ike ịgụnye Home, ngwa a kapịrị ọnụ nke anyị ga - enwe ike na-achịkwa ngwa niile ulo, nke mere na site na ngwa a di mfe anyi nwere ike nweta ọrụ ụlọ ọ bụla dị ka ịgbanyụ ọkụ niile, ịgbanye kọfị na ịhazigharị kpo oku, n'etiti nhọrọ ndị ọzọ ọ dị ka ọ ga - adị ka ọdịnihu.
Kedu ihe ọzọ anyị tụrụ anya na WWDC 2016?
Enwerelarị okwu maka omume restyling nso nke Macbook Pro na usoro 13 "na 15" maka isi okwu ụlọ ọrụ kachasị ọhụrụ, nke anyị na-enweghị ike ịhụ ọganiihu ọ bụla n'ụdị ndị a. Otú ọ dị, a na-atụ anya ya nkera nke abụọ nke 2016, Apple na-eju anyị anya karịa ọkụ, kọmpụta laptọọpụ siri ike karị, yana eserese dị mma na batrị na-arụ ọrụ nke ọma.
Banyere ngwa, weebụsaịtị Asia a ma ama MacOtakara elelela na Apple na-arụkwa ọrụ dị mkpa ndozi maka ngwa foto iPhoto na Foto, a ga - esonye na iOS 10 na Mac OX X 10.12, nke ahụ ga - ekwe ka dezie ozi EXIF nke ihe oyiyi na ụfọdụ mgbanwe dị ka nchapụta na ndị ọzọ kwa na kpọmkwem akụkụ nke ọ bụla foto na a ahịhịa-dị ka nhọrọ.
Izu ole na ole tupu mmalite nke WWDC 2016, Anyị na-aga n'ihu ịnata obere ozi nke anyị na-eji mata nke ọma ihe ụlọ ọrụ kwadebeere anyị maka afọ ọzọ. Anyị ga-echere ruo mgbe June 13 mara n'ụzọ zuru ezu na Ihe dị ọhụrụ na tvOS, watchOS, iOS 10 na Mac OS X 10.12.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Asịrị » WWDC 2016: ihe kachasi anya maka iOS na OS X
Apple gogo onye engineer Google nke na-elekọta ụgbọ ala eletrik